bass guitarist, Greg Lake, mpitendry gitara, mpamokatra, mpihira
Gregory Stuart Lake "Greg"(10. 1947 Novambra Poole, Angletera - 7. 2016 London tamin'ny Desambra) dia Britanika mpitendry zavamaneno, mpihira, mpamoron-kira sy mpamokatra, mpikambana mpanorina Mpanjaka jaky sy Emerson, Lake & Palmer.
60. Ny fahavaratra: Ny andriamanitra sy ny Crimson Mpanjaka
Greg Lake dia liana tamin'ny mozika hatramin'ny fahatanorany. Ny lehibe indrindra hitan'i Emerson, Lake & Palmer, "Lucky Man," hoy ny nosoratany tamin'izy mbola tany am-pianarana. Tao amin'ny 1968, ny Lake dia mpikambana ao amin'ny tarika antsoina hoe The Gods. Tao anatin'izany vondrona izany dia nisy ireo mpikambana sasany avy any Uriah Heep. Ny vondrona havia havia amin'ny 1968 fahavaratra alohan'ny hamoahana ny album voalohany.
Farihin'i Farafangana mba hananganana Mpanjaka Crimson miaraka amin'i Robert Fripp, namana akaiky ny sekoliny. Koa satria mpihaza gitara ny Fripp sy ny Farihy tamin'ny voalohany, nanomboka nilalao bas ny Lake.
Ny rakikiran'i King Crimson voalohanyAo amin'ny kianjan'ny Crimson KingNy farihy dia natao ho mpihira sy mpihira. Ny orinasa dia novokarin'ilay mpamokatra iray Tony Clarke, izay mpamokatra ho an'ny The Moody Blues. Andro vitsy taty aoriana dia lasa i Clarke, satria tsy azony ny zavatra tadiavin'ny vondrona. Ny farihy dia nandray ny anjara asan'ny mpamokatra, na dia hita ao amin'ny rakikira aza ny tarika manontolo.
Crimson King dia nandeha nitsidika an'i Amerika Avaratra niaraka tamin'ny The Nice, izay "fitsangatsanganana" fitsidihana. Tamin'ny volana Aprily 1970, taorian'ny fitetezam-paritra izany Lake niala Mpanjaka jaky ary miaraka keyboardist Keith Emerson ny The Nice sy ny drummer Carl Palmer avy Atomika Akoholahy nanorina ny Trio Emerson, Lake & Palmer. Na dia teo aza ny fanalany ofisialin'ny King Crimson, dia nanaiky i Lake mba hanampy azy ireo hamita ilay rakikira faharoa, King CrimsonAmin'ny fiakaran'i Poseidon.
70. Fahavaratra: Emerson, Lake & Palmer
Nanana fahombiazana goavana i ELP tamin'ny taona 1970 (namidy tamin'ny alàlan'ny 30 an-tapitrisa albums) ary nanana anjara lehibe tamin'ny fampandrosoana rock. Ny Lake dia nanolotra hira maro tao amin'ny repertoire de ELP, saingy ny tena manaitra dia ny C'est la vie guitars (Asa Vol. I), "Mbola ... mampivily ahy ianao" (Aretina Aretina) sy "The Sage" ("Sary eo amin'ny fampiratiana"). Nanjary malaza ny Lake taorian'ny famoahana ny "Izaho mino ny Krismasy hoavy" ao 1975, izay nampidirina tao amin'ny album Vololona Volume II.
Ao amin'ny 1973 Lake Manticore nanangana marika sy nanao sonia ny fifanarahana amin'ny sasany tena manan-talenta tahaka ireo mpanakanto Italiana Premiata Forneria Marconi sy ny Banco do Soccorso mutates sy ny mpamoron-kira sy jaky Mpanjaka Emerson, Lake & Palmer Peter Sinfield.
80. fahavaratra: Asien sy solontenan'ny sarimihetsika
Taorian'ny fampitsaharana ny vondrona ELP, ny Farihin'i 1983 dia nitsidika an'i Azia ho toy ny fanoloana vonjimaika an'i John Wetton ary namoaka alalana solo roaGreg Lake(1981) atetika(1983), miaraka amin'ny fandraisana anjara amin'ny mpihira malaza Thin Lizzy Gary Moore. Tao 1986, miaraka amin'i Emerson sy Cozy Powell, dia namoaka rakikira izy ireoEmerson, Lake ary Powell, izay fananganana indray ny ELP niaraka tamin'i Powell nanoloana an'i Palmer, izay nilalao baomba niaraka tamin'i Azia.
90. Fahavaratra: indray Emerson, Lake & Palmer
Emerson, Lake & Palmer tafangona tamin'ny fiandohan'ny taona 1990 ary ny repertoire rock dia nandroso nandritra ny fampisehoana an-tsehatra nandritra ny taona maro ary namoaka rakitsary roa. 1998 dia nanana fihetsika ratsy teo amin'ireo mpikambana ao amin'ny ELP ary nandao ny vondrona ny vondrona.
2000: Famokarana ankehitriny ary Greg Lake Band
Keith Emerson ao amin'ny memoirs "Pictures of a Exhibitionist," avy amin'i 2004, dia maneho ny sary malaza nataon'i Glig Lake. Namaly izy tamin'ny filazana fa tsy hanohy intsony amin'ny ELP intsony izy. Hatramin'izay fotoana izay, tsy dia nahita firy izy teo amin'ny sehatry ny mozika, indrindra rehefa nandeha tany 2001 niaraka tamin'ny Ringo Starr izy ho mpikambana ao amin'ny All-Starr Band. Tamin'ny faran'ny taona dia nilalao baomba gitara tao amin'ny hira "Real Good Looking Boy" avy amin'ny The Who ny 2003.
22. Ny octobre 2005 dia nanomboka fivahinianana tamin'ny fifaninanana niaraka tamin'ny tarika vaovao "Greg Lake Band", izay nahazo valiny tsara. Ny tarika dia nandefa an'i David Arch tamin'ny klavier, Florian Opahle teo amin'ny gitara, Trevor Barry bass, ary Brett Morgan tamin'ny amponga. Ny sary Warner Bros / Classic dia namoaka ny dika roa an'ny 2006 tany am-piandohana izay niakarana be i Greg Lake, ny feony dia lalindalina kokoa sy miha-mahery noho ny hatramin'izay. Ny Greg Lake Band dia tokony hanatrika ny fitsidihan'ny 2006 tamin'ny Septambra, saingy nantsoina izy tamin'ny minitra farany noho ny "olana ara-pitantanana."
Greg Lake 21. Ny Desambra 2006 dia nanao ny hira "Karn Evil 9" miaraka amin'ny Trans Siberian Orchestra ao amin'ny Coliseum Nassau ao Uniondale, New York.
Maty tany Londres izy tamin'ny 7. Desambra 2016 tamin'ny taonan'ny 69 taorian'ny ady amin'ny homamiadana.
1995Ny Mpanjaka Biscuit Flower Hour dia manolotra an'i Greg Lake amin'ny Concert
1997Ny Greg Lake Retrospective: From The Beginning
1998Avy amin'ny The Underground: The Official Bootleg
1981Tiavo Ianao Tokoa
1981Avelao ho tiako ianao alohan'ny handehananao
1981Ho an'ireo izay sahy
1983Vehivavy toa anao
7: Amin'ny fiakaran'i Poseidon
10: Ireo andriamanitra
14: Ao amin'ny kianjan'ny Crimson King
15: Ny tari-dàlana 21st Century ho an'ny Mpanjaka Crimson - Volume One - 1969-1974
16: I Earl no anarako
20: Azia (vondrona mozika)
21: Mpanjaka Crimson
27: Ny lisitr'ireo sarimihetsika hockey amin'ny MS 2011
29: Lisitry ny bassista
31: Miverina amin'ny rindrina
32: 10. Novambra
33: 1970 amin'ny mozika
37: Etazonia amin'ny Lalao Olaimpikan'ny Lalao 1984
38: Helix (vondrona mozika)
39: Fiadiana Tompon-daka eran-tany 1997
40: Ice Hockey Men amin'ny Olympika Winter 2014
45: eo ambanin'ny Fonony
46: Ny lisitr'ireo sarimihetsika hockey amin'ny MS 2015
49: Fanomezana (Môrmôna)
Stuart Gregory "Greg" Lake (10. 1947 Novambra Poole, Angletera - 7. 2016 London tamin'ny Desambra) dia Britanika mpitendry zavamaneno, mpihira, mpamoron-kira sy mpamokatra, mpikambana mpanorina Mpanjaka jaky sy Emerson, Lake & Palmer.
Greg Lake ny tena mitondra ny lohateny hoe bitany trano fakana rakikira Greg Lake. Ny rakikira Nafahana tamin'ny Oktobra 1981 amin'ny akorany Records marika sy ny mpamokatra irery Greg Lake.Seznam skladebObsazení Greg Lake - gitara, zpěvGary Moore - kytaraSteve Lukather - kytaraDean Parks - kytaraW. G. Walden - kytaraGreg Mathieson - klávesyBill Cuomo - klávesyTommy Eyre - klávesyMichael Giles - bicíJeff Porcaro - bicíJode Leigh - bicíTed McKenna - bicíTristian Margetts - baskytaraDavid Hungate - baskytaraWillie Cochrane - pipeDavid Milner - pipeClarence Clemons - saxophone
Emerson, Lake & Palmer (abbreviated ELP) dia vondron'ny rock Anglisy. Ao amin'ny 70. ny taonan'ny taonjato farany dia nalaza be, namidiny tapakila an-tapitrisany ireo 40 ary nanao fampisehoana lehibe. Ny tarika dia nahitana an'i Keith Emerson (keyboards), Greg Lake (gitara, bass, vocals) ary Carl Palmer (drums, percussion). Io rock trio io, izay naorina tao 1970, dia naka ny sasantsasany tamin'ny mozika klasika eoropeanina amin'ny asany ary mety ho tafiditra ao amin'ireo solontenan'ny rock progressive sy symphonique.
Emerson, Lake & Palmer dia rakitsary tantara an-tsarimihetsika nataon'ny alika britanika Emerson, Lake & Palmer. Ny fanoratana dia natao nandritra ny taona 1970 tao amin'ny Advision Studios tany Londona noho ny famokarana an'i Greg Lake. Tany Angletera dia navoaka tamin'ny 1970 ny album; any Etazonia hatramin'ny Janoary 1971. Ao amin'ny 2012, navoaka indray ilay rakikira.
Tarkus no rakipahalalana faharoa momba ny rock band Emerson, Lake & Palmer. Ny rakitsariny dia tao amin'ny 1971 tamin'ny Janoary tao amin'ny Advision Studios tany Londres. Navoakan'i Greg Lake, navoaka tamin'ny volana 1971 tao Island Records ilay rakikira.
Ny Best of Emerson, Lake & Palmer (1994) dia fitambaran'ireo rakikira vondrona vatolampy Emerson, Lake & Palmer.Seznam lalana "hatrany am-piandohana" (4: 13) "Jerosalema" (William Blake, C. Hubert H. Parry) (2 : 44) "Na izany aza ... Miverena ahy ianao" (2: 53) "Fanfare ho an'ny olon-tsotra" (Aaron Copland) (Solo Bible 2: 57) "Knife Edge" (5: 05) "TARKUS" (20: 35) "fipoahana" (2: 43) "vato taona" (3: 44) "Iconoclast" (1: 15) "Lamesa" (3: 11) "Manticore" (1: 52) "piadiana" (3: 51) "Aquatarkus" (3: 59) "Karn ratsy 9 1 Part 2st Impression" (4: 43) "C'est La Vie" (4: 16) "Hoedown" (Aaron Copland) (3: 43) "Trilogy "(8: 53)" Honky Tonk Train Blues "(3: 09)" Black Moon "(tokan-tena dika, 4: 46)" Lucky Man "(4: 37)" Izaho mino Dadabe Noely "(Greg Lake) ( tany am-boalohany irery Version 3: 30) "Peter Gunn" (Bo nus lalana)
Epitaph dia ady baolina kitran'ny King Rock Crimson. Navoaka tao amin'ny 1997 izy (jereo ny 1997 amin'ny mozika) ary manasongadina ny fampisehoana sy ny fampielezam-peo ny tarika tamin'ny vanim-potoana voalohany, avy amin'ny 1969.
Ao amin'ny Wake of Poseidon no rakikira faharoa an'ny King Rock Crimson britanika. Navoaka tao amin'ny 1970 (jereo ny 1970 amin'ny mozika), ary napetraka tao amin'ny 4 ny lalao mozika any UK. toerana, izay vokatra tsara indrindra amin'ny Mpanjaka Crimson.
Dean Parks (* 1947) dia mpanoratra gitara amerikana, vadin'i Carol Parks. Teraka tao Fort Worth, Texas, nifindra tany Los Angeles i 1970. Nandritra ny asany dia Nilalao maro ny fandraisam-peo, ary an-jatony niara-niasa tamin'ny mpihira maro anisan'izany Leonard Cohen, ohatra, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Lizz Wright, Greg Lake, Billy Joel, David Cassidy sy Art Garfunkel. Izy no niasa tamin'ny ankapobeny ho mpanakanto mpiangaly mozika, ary nilalao tamin'ny fampisehoana, toy ny 1977 sy Bread. Tamin'ny taona 2005 ho 2011 dia niaraka tamin'i David Crosby sy Graham Nash.
Works Volume 1 no rakikira fahadimy tamin'ny teny anglisy band band Emerson, Lake & Palmer, navoaka tao amin'ny 1977. Ity no rakitsary roa (2 LP, taty aoriana amin'ny CD 2) ary mizara ho fizarana efatra.
Ny Andriamanitra dia iray tarika anglisy naorina tamin'ny 1965, ny mpialoha lalana malaza kokoa Heep Oria. Tantara skupinyMick Taylor (tatỳ aoriana John Mayall & ny Bluesbreakers), Brian Glascock (tatỳ aoriana ny Bee Gees sy ny Motels) sy John Glascock (tatỳ aoriana Toe Fat sy Jetro Tull), ireo mpiara-mianatra amin'ny sekoly any Hatfield sy nilalao niaraka tao amin'ny antokon'ny miaramila atao hoe Juniors (koa amin'ny olon-kafa), izay naorina tamin'ny taona 1962. Ny ekipa efa Malcolm Collins sy Alan Shacklock. Ao amin'ny Columbia nanoratra ny voalohany tokana "Misy ankizivavy tsara tarehy / Pocket Size" (Columbia DB7339), izay tonga avy any 1964.
Peter Giles (* 17. 1944 Jona Havant, Hampshire) dia Britanika sy zpěvák.V bassist taona 1967 nanangana niaraka ny rahalahiny, drummer Michael, sy mpitendry gitara Robert Fripp vondrona Giles, Giles sy Fripp. Na dia tsy hahatratra fahombiazana be, fa vitsy namoaka rakikira tokan-tena, ary iray. Ao amin'ny fararano 1968 Peter Giles dia nosoloina Greg Lake, izay namorona ny tarika Mpanjaka jaky. Mifanohitra amin'izany, tany am-boalohany 1970 niala Lake Giles ho toy ny mpilalao basse nandray anjara tamin'ny rakikira faharoa tamin'ny antokon'ny miaramila mitondra ny lohateny hoe In ny Wake ny Poseidon.
Gregory John Norman AM (* 10 Febroary 1955, Mount Isa, Queensland) dia golfa aostralianina. Ao amin'ny 80. ary 90. taona 20. Taonjato faha 331 ho an'ny mpitarika an'izao tontolo izao ny taonjato maro. Nanomboka niasa tao amin'ny 15 taona i Golf ary efa-taona taty aoriana dia tonga teo amin'ny tambajotra matihanina izy. Tao amin'ny 1976 dia nahazo ny fifaninanana voalohany (West Lakes Classic any Adelaide) ary tsy ela dia nanomboka nanosika ny làlan'ny PGA.
Ny teny hoe superskupine dia manondro ny mozika rock amin'ny ankamaroan'ny mpihira sy mpihira fanta-daza. Supergroup niforona tsikelikely, nandritra ny mpiasa mitohy fiovana izay niforona voajanahary ao amin'ny vondrona (toy ny eny, jaky Mpanjaka), na dia noforonina avy amin'ny rangotra, ratra kely avy amin'ny fantatra mozika (toy ny Emerson, Lake & Palmer dia nitarika Zeppelin, Cream). Ny sasany supergroup naharitra folo taona, fa ny fiainana ny ankamaroan'izy ireo dia fohy sy ny faharavan'ny matetika miaraka amin'ny ady eo amin'ny olona lehibe loatra.
Ao amin'ny Fitsarana Crimson King, mitondra ny lohateny hoe "Ny Fijerena" nataon'i King Crimson, dia album voalohany nataon'i 1969, britanika rock band King Crimson. Nahazo ny 5 tao amin'ny charts UK ny album. toerana. Tany Etazonia dia nahazo ny RIAA Gold Plaque izy ary heverina ho iray amin'ireo lahatsoratry ny mozika rock progressive.
Ny 21st Century Torolalana ho an'ny Mpanjaka jaky - Boky iray - 1969-1974 ny fifantenana boaty, dia nampitabataba ny Britanika vatolampy tarika Mpanjaka jaky. Nafahana izy tamin'ny volana Oktobra 2004 (jereo ny 2004 in mozika) .This čtyřdiskový boaty napetraka dia ny ampahany voalohany feno cross-fizarana Mpanjaka jaky, izay nanambatra ny mpitarika sy ny mpikambana ihany no maharitra, mpitendry gitara Robert Fripp. Ny 21st Century Torolalana ho an'ny Mpanjaka jaky - Boky iray - 1969-1974, araka ny anarany manoro hevitra, niresaka momba ny famoronana tamin'ny antokon'ny miaramila satria 1969 anoloany tamin'izany Septambra 1974 Fripp horavàna. Ny fitoeran'ny boaty dia misy horonam-peo roa ary rakitsary roa notontosaina teo aloha.
Ny anarako dia Earl dia andian-tsarety Amerikana novokarin'ny mpamokatra Amerikana Greg Garcia niaraka tamin'ny 20th Century Fox. Nalefa tamin'ny 20 ilay andian-tantara. September 2005 mankany 14. May 2009 amin'ny NBC. Ao amin'ny Repoblika Tseky ity andian-tantara ity dia navoakan'i Prima Cool.
Peter John Sinfield (* 27. 1943 Desambra Fulham, London) dia anglisy mpanakanto, poeta sy ny mpitendry zavamaneno, fantatra amin'ny hoe ny mpanoratra sy ny mpikambana ao amin'ny tarika vatolampy jaky Mpanjaka, izay mpiara-manorina.
Colin Flooks, fantatra amin'ny anarana hoe Cozy Powell (29. 1947 Desambra, Cirencester, Angletera - 5. 1998 Aprily) vatolampy dia Britanika bubeník.Svou asa mozika dia nanomboka tao amin'ny vondrona in 1965 ny mpanao ody ratsy. Tao amin'ny 1971 dia niditra tao amin'ny Jeff Beck Group izy ary nandefa rakitra roa izy, avy eo nilalao solo ary nanorina ny tarika Bedlam. Ao amin'ny 1973, ny solontenany tokana, Dance With The Devil, no laharana fahatelo ao amin'ny lisitry ny hitsikerana an'i UK. Ny taona nanaraka i Cozy dia nanjary nalaza rehefa nilalao tamin'ny fahitalavitra izy ary nidaroka ilay rakitsoratra ho ilay mpamilika haingana indrindra. Izy koa dia nibanjina ny BBC ho an'ny ankizy antsoina hoe Record Breakers.
Robert Fripp (* 16 Mey, Minisitry ny Minisitera Wimborne, Dorset) dia mpilalao guitarista britanika, mpamokatra ary mozika, fantatra amin'ny maha-hany mpikambana maharitra ao amin'ny band Crimson mpandresy rock. Ny asany mitodika amin'ny efa-polo taonany dia nandalo karazana mozika maromaro. Fripp nametraka 1946. toerana ao amin'ny gazetiboky Rolling Stone "42 tsara guitarists amin'ny fotoana rehetra".
Asia dia tsikelikely vatolampy supergroup, niforona ny teo aloha ny vondrona mpikambana ao Eny, Mpanjaka jaky, Emerson, Lake & Palmer, mihazona ny tohatra, Oria Heep, UK, ary ny Buggles in 1981.
King Crimson dia tarika rock britanika natsangan'ny mpandihy 1968 Robert Fripp sy mpiloka Michael Giles. Raha ny mahazatra, dia anisan'ny nanorenana vondron'olona tsikelikely vatolampy ny asany miharoharo ny fitaoman samihafa mozika fomba toy ny Jazz, kilasika sy andrana mozika, psychedelic vatolampy, metaly mavesatra, vaovao onja, mafy vatolampy, gamelan, folk, electronica sy ny amponga sy ny basse. Tany am-piandohana dia nisy tarika britanika nanangona mozika avy any Royaume-Uni sy Etazonia hatramin'ny 1981.
Peterborough dia tanàna ao amin'ny provansin'i Ontario. Ny 125 kilometatra avaratra-atsinanan'i Toronto no misy azy io. Peterborough dia Kanadiana Kanadianina, hany kajika manokana ao Amerika. Ao Ontario, ny tanàna dia fantatra ho fototra ho an'ny faritra fitsangatsanganana Kawarthas Lakes. Peterborough dia nomena anarana hoe Peter Robinson, mpanao politika Kanadiana, iray amin'ireo mpikarakara ny fifindra-monina any amin'ny faritra.
Misha Mengelberg (5 June 1935 Kiev - 3 Martsa 2017 Amsterdam) dia pianoista jazz nasionaly. Teraka tany Kiev izy tamin'ny naha-zanaky ny filoham-pirenena holandey Karel Mengelberg, ary tamin'ny faramparan'ireo taona 1930 dia nipetraka tany Holandy niaraka tamin'ny fianakaviany izy. Nanomboka nilalao pianô izy tamin'ny faha-dimy taonany, ary avy amin'ny 1958 ka hatramin'ny 1964 dia nianatra tao amin'ny Conservatory Hague izy. Nosoratany voalohany tamin'ny Amerikana Eric Dolphy ny 1964. Nandritra ny asany dia niara-niasa tamin'ny mpihira hafa izy, toa an'i Steve Lacy, Peter Brötzmann, Louis Andriessen, Pino Minafra ary Roswell Rudd. Namoaka alalana tamin'ny alàlany ihany koa izy. Ao amin'ny 2005, ohatra, Senne Sing Song (Tzadik Records), mipetraka amin'ny bassist Greg Cohen sy mpikatroka Ben Perowsky.
Kenny Davern (teraka anarana John Kenneth Davern, 7. 1935 Janoary Huntington, New York, Etazonia - 12. 2006 Desambra Sandia Park, Nouveau Mexique, Etazonia) clarinetist Firenena Etazonia. Ho an'ny asan'ny jazz clarinetist, dia nanapa-kevitra ny hahita an'i Pee Wee Russell voalohany izy; Nanomboka nilalao tamin'ny faha-iraika ambin'ny folo izy. Niditra tao amin'ny tarika Jack Teagarden tao 1954 izy ary namoaka ny rakikirany voalohany tamin'ny anarana In The Gloryland ny 1958. Nandritra ny asany dia niara-niasa tamin'ny mpihira hafa izy, anisan'izany i Ken Peplowski, Steve Lacy, Greg Cohen, ary Paul Motian. Maty tamin'ny aretim-po izy tamin'ny faha-70 taonany.
Crazy Ex-Girlfriend dia tantara amerikana am-pihetseham-pihetseham-pihetseham-pihetseham-pihetseham-po, nalefan'ny The CW. Ny mpanoratra ny andian-tantara dia Rachel Bloom sy Aline Bosh McKenna. Ny seho voalohany dia niely tamin'ny 12. Oktobra 2015. Nanomboka teo dia nisy andian-tsarety 18 iray manontolo, ary ny andiany 2016 / 2017 dia tonga faharoa. 8. Ny station 2017 tamin'ny volana janoary dia nanamafy ny fanoratana ny andiany fahatelo, izay navoaka voalohany tao amin'ny 13. Oktobra 2017.
Martin P4M Mercator dia sambon-dranomasina amperinasa natsangan'ny orinasa Glenn L. Martin. Mercator dia mpihira tsy nahomby tamin'ny fandevenana an-dranomandry am-polotaonan'i Etazonia. Ny fifaninanana dia nahazo ny Lockheed P2V Neptune tamin'ny farany. Mercator dia niaina tolotra voafetra ho fitaovam-panafarana elektronika efa ela. Ny singa lehibe indrindra dia ny fampiasana fitaovam-piaramanidina sy jiro.
Ice Hockey World Championships 2011 16 nanatrika ny firenena Amerikana týmu.Soupiska týmuTrenéři Gordon Scott, Phil Housley, Greg CroninSoupiska belarosiana týmuTrenéři Eduard Zankovec, Vladimir Tsyplakov, Aleksandr AndlexejevSoupiska Czech týmuTrenéři Alois Hadamczik, Josef PalečekSoupiska Danoà týmuTrenéři Per Bäckman, Tomas JonssonSoupiska Anarana Jukka týmuTrenéři Jalonen, Petri Matikainen, Pasi NurminenSoupiska French týmuTrenéři Dave Henderson, Pierre pousse, Lionel CharrierSoupiska Canadian týmuTrenéři Ken Hitchcock, Scott Arniel, Peter DeBoerSoupiska Zavatra tsy týmuTrenéři Oleg Znarok, Leonids Beresnevs, Harijs VītoliņšSoupiska alemaina týmuTrenéři Uwe Krupp, Ernst Höfner, Harold KreisSoupiska Norvejiana týmuTrenéři Roy Johansen, Knut Jørgen Stubdal, Per-Erik AlcénSoupiska aotrisianina týmuTrenéři Bil Gilligan, Manny Viveiros, Kurt HarandSoupiska týmuTrenéři Rosiana Vyacheslav Bykov, IG na ZacharkinSoupiska Slovaky týmuTrenéři Glen Hanlon, František Hossa, Lubomír PokovičSoupiska Slovenianina týmuTrenéři Matjaž Kopitar, Nik ŽupaničSoupiska book týmuTrenéři Par Marts, Roger Rönnberg, Stefan LadheSoupiska ekipa Soisa
MIT Daedalus 88 dia olombelona fiaramanidina vita amin'ny MIT (MIT, Cambridge, USA), izay 23. April 1988 dia nandeha tamin'ny 115,11 kilometatra nandritra ny ora 3 sy 54 minitra.
Czech basse mpilalao AZ Douda Milan (Jan Sezelim, Mattocks, hitetika, ala feo, CA-NA Band, Dr. Jane) Mark Bero (Low an-danitra, aloha Krucipüsk) Bronislav "Bruno" Kovarik (Krabathor) Zbynek Rýpar (Liveevil) Karel Ferda ( Traktor) Karel Maly (Acoustix) Mark Abraham (SK) - (Fleret) Vladimir Adamský - (Santa) Jakub Antl - NightworkMilan Hanak - (Titanic) Gusta - ProhibiceRobert Balzar - (oh. Afrika Atsimo, D. Bárta & Illustratosphere Hana Hegerová) Oto Bezloja (Matadors) Milan Broum (Olaimpika) Filip BenešovskýOndřej Bohemia - KvětyVilém Čok - (New Rose, Prague fifantenana) George "Marta" Dvorak - (Našrot) Kohout - Zdrawej důchodLuboš Vršanský (Elementa, Ahard) Pavel Fort - (oh. Flamengo ihany no tohanako ) Pavel Galler - (Dreadrot) Jan HaisJan Hromas - (Kučerovci, taloha koa Greenhorns) Marek "Mara" Kohout - (Sandra sy ny Vembloudi) (trozona) Matthew Havlicek - (ambony Worcester, Final fahitana, Fastfood, JamiroquaiCZ, Michal Forêt , Multiplayer) M Ato Ivan (SK) - (Michal Pavlicek, BSP, Chameleon, Krucipüsk,-bohiny Al Dhábba), Fredrik Janáček - (-123 min., Sun Orchestra) Jakub Janků - (Eks. Thesaurus, Wolfarian) Honza KrausMichael Beautiful - Laco DécziZdeněk Kub - (Arakain) Vladimir fingotra KulhánekMartin Light - Lucie BíláPavel Chrastina OlympicVláďa Caisek - Buffalo BillJiří Meisner - (faharoa ahitra, Kamelot) Mardoša - (Tata Bojs) Petr Novotny - (Zalman & spol. , Cohiba) Vojtech Novák - Koudelníkův synVladimír PadrůněkPeter Pavlik - (Yo Yo Band) Petr Rotschein - (Kamelot) Milan taratasy - NedvědiFrantišek RabaPavel Jakub RybaRichard Scheufler - (Sheuflers, Prague fifantenana II, Mpanjaka Size) Milan Špalek - (Neny) Martin ŠtecSvatopluk ŠvábJiří Vesely - (oh. Big lohan'ny Ebony Brothers) Otto Kokštein - (oh. fahaverezan-tsaina) Karel ŠípPepa Šiko - (Doğa) Michal Šerák - (-kolaka fifanarahana, 2Wings, Daryl Green) Franz Franz Fiedler- (DTR) Jindra Vobořil - (oh . voahazona, Mikraoba, Gen, Pump, 39 Special) Miroslava Vitous - (Weather Report) Kůstka Josef - (Blue Effect) Jiří Kucera DrnecVojta (trampoline Reunion Band) George "Old Man" Sindelar - (Catapult) Petr Kuliš Kujal - (Streetmachine) Kembelín Prokeš - (Lucky Nero) Martin "Donald" Donat - (Booters) Michal Voldřich - (Pipeline) Pavel "Chozo" Jurda - (Bluesberry) PBCH. - (Lucie, Wanastowi Vjecy)
Crazy Horse dia rock band Amerikana fantatra amin'ny fiaraha-miasa amin'i Neil Young. Hatramin'ny 1969 ka hatramin'izao, Crazy Horse sy Younge dia nandrakitra ny Studio 11 sy ny alalana mivantana. Navoaka tamin'ny Neil Young sy Crazy Horse ireo ala. Ny Crazy Horse, ao amin'ny andiany 1971 - 2009, dia namoaka sary an-tsary enina.
Ny Back Against the Wall dia ny rakikiran'i Billy Sherwood, navoaka tao amin'ny 2005. Niara-niasa tamin'ny mozika maro avy amin'ireo vondrona rock malaza tao amin'ny rakikirin'i Sherwood izy. Ny rakikira dia manasongadra ireo rindrina avy ao The Wall avy amin'ny Pink Floyd. Namoaka rakitsary hafa i 2006, mampiseho ny Dark Side of the Moon (avy amin'ny Pink Floyd), ary antsoina hoe Miverina any amin'ny Toetry Mainty amin'ny Volana.
Novambra dia 314. andro ny taona ao amin'ny kalandrie gregorianina (315. andro amin'ny dingana isan-taona). Ny faran 'ny taona mbola 51 andro. Fialan-tsasatra nankalaza Evžen.UdálostiČeské země1620 - Roa andro taorian'ny ady tao White Mountain any Prague capitulated miaramila ny Ferdinand II. Štýrského.1664 - Créé Diosezin'i královéhradecká.1989 - Raha misy loza akaikin'ny lalamby New Kopisty namono 6 58 ny olona ary nisy zraněno.Svět1444 - Crusader fiara Mpanjaka Vladislav III. Varnenčika dia resy tamin'ny ady tao Varna Tiorka tarihan'i Murad II. ary i Vladislav zabit.1494 - dia namoaka boky fianarana lehibe voalohany kaonty Summa de Arithmetica, rafitsary, arakaraka ny Luca de Proportionality Pacioli.1871 - Henry Morton Stanley nahita very dia lavitra David Livingstone akaikin'ny farihy Tanganika.1918 - Nambara Saxon republika.1970 - Nalefa volana Rover 1.Narození Czech 1719 - Jan Krumlov, mpamoron-kira sy virtuoso Viola d'amore († 24. 1763 Septambra) 1772 - Johann Nepomuk Kanka, mpamoron-kira sy ny mpahay lalàna († 15. 1865 Aprily) 1812 - Josef Jaroslav Křičenský, Czech amin'ny fifohazana mpanoratra († 16. Aprily 1886) 1828Konrad Bayer, chess mpamoron-kira, mpanoratra antsoina hoe. tsy mety maty asa († 21. Septambra 1897) Franz Jordana, Czech mpandraharaha sy ny mpanao politika ny alemà zom-pirenena († 9. Desambra 1884) 1834 - Martin Josef Novacek, mpitarika, mpamoron-kira sy ny mpampianatra mozika tany ivelany († 19. 1906 Martsa) 1845 - Karel Vrba, mineralogist, ka Rector rlovy, mpanao politika († 7. 1922 Desambra) 1869Wilhelm Elsner, tantara an-kira mpihira († 26. Aogositra 1903) Michal Tomik, Tsekoslovakia mpanao politika (†?) 1872 - Francis Klokner, Rector ny Czech Teknika University († 8. Janoary 1960) 1874Otakar Bradáč, mpamoron-kira († 11. Janoary 1924) Leopold Škarek,-paritany ny Zezoita († 23. March 1968) 1875 - Vaclav Myslivec, Tsekoslovakia mpanao politika († 29. May 1934) 1876 - Martin Bohdan Lany, Czech dia lavitra, mpandraharaha sy ny misionera († 1941) 1880 - Bohumil malina, Vikera jeneralin'ny ny Arsidiosezin'i Prague († 20. May 1965) 1883 - Bedrich Antonin Wiedermann, taova virtuoso, mpampianatra mozika sy ny mpamoron-kira († 5. 1951 Novambra) 1886 - růžena šlemrová, Czech mpilalao sarimihetsika († 24. 1962 Aogositra) 1894Stanislav Mentl, MS. Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka sy ny ara-batana Education († 12. 1981 Septambra) Jaroslav Vacek, legionnaire sy ny fanoherana mpiady († 23. 1944 Aogositra) 1899 - Jan Roth, Czech cinematographer († 4. 1972 Oktobra)
UdálostiFestival Isle of WightSteve Howe nosoloina tao amin'ny vondrona Eny mpitendry gitara Peter BankseZaložené skupinyThe Doobie Ry rahalahy, teo aloha Fahendrena, miorina Tom Johnston, Patrick Simmons, John Hartman, Dave Shogren.Electric Light Orchestra naorin'i Roy Wood, Jeff sy Lynne Bev Bevan.HorslipsKantořiOceanQueen nanorina ny mpikambana telo voalohany Freddie Mercury, Brian May sy Roger Taylor. Bassist John Deacon dia hiditra ao 1971.StyxEmerson, Lake & Palmer Keith Emerson, Greg Lake sy Carl Palmer.Earthen VesselZaniklé skupinyThe Beatles mikorosy fahana. Ny mpikambana rehetra hamoaka Solo alba.The Dave Clark FiveThe MonkeesSimon & Garfunkel mikorosy fahana ary samy mpikambana ao amin'ny Duo naka Solo kariéru.The Nice mikorosy fahana. Keith Emerson ELP.Zemřeli17 monina. Janoary - Billy Stewart, mpihira (32 taona) 3. Septambra - Alan "jamba Vorondolo" Wilson, mpikambana ao amin'ny am-bifotsy Heat (27 taona) 18. Septambra - Jimi Hendrix, ny mpitendry gitara sy ny mpihira (27 taona) 19. Oktobra - Janis Joplin, mpihira (27 taona) AlbaDomácí Coniunctio - Blue Effect sy Jazz Q PrahaKlíč ny fahalalana - The Fandrosoana Organization (EP) fisaintsainana - Ny Blue EffectSynkopy 61 - Synkopy 61 (EP) avy any ivelany 12 Hira - Randy Newman Beard ny Stars - Tyrannosaurus Rex Song ho Ahy - FamilyABC - Jackson 5Abraxas - SantanaAfter ny Gold Rush - Neil YoungAirconditioning - Curved AirAll tsy maintsy Mandehana - George HarrisonAmerican Beauty - Velom-pankasitrahana DeadAmerican Vehivavy - The maminavina WhoAnyway - FamilyAtom Fo Reny - Pink Floyd Fahatsiarovana an'i Jack Johnson - Miles Davis Fahatsiarovana ny tsara indrindra Damn Fiddle Player ao amin'ny World - Merle trotraka, CountryBand ny Gypsys - Jimi HendrixBarrett - Syd BarrettBenefit - Jetro TullThe Best ny Pink Floyd - Pink FloydThe Big O - Roy OrbisonBill Haley ny Scrapbook: Miaina amin'ny mangidy Farany - Bill Haley ny CometsBitches & labiera - Miles Davis, JazzBlack Sabata - Black SabbathBridge Mihoatra ny Olana D Water - Simon & GarfunkelCanto Libre - Víctor JaraChanges - The MonkeesChapter 2 - Robert FlackChicago (indraindray antsoina hoe Chicago II) - ChicagoClimbing! - MountainCloser ny Home - Grand Funk RailroadClose ho Anao - CarpentersCome To ny Garden - Minnie RipertonCosmo ny Factory - Creedence Clearwater RevivalCucumber Castle - The Bee Gees
Ny Hershey Bears dia ekipa matihanina hockey matihanina ao amin'ny Ligy Hockey Amerikana. Ny ekipa dia miasa any Hershey, Pennsylvanie. Ny lalao an-trano dia nilalao tao amin'ny kianjan'ny Giant Center. "Bears" no klioba lava indrindra ao AHL - ny fifaninanana dia efa niasa hatramin'ny 1938. Ny ekipa dia nilalao 20. Desambra 2006 ny 5,000. mifanaraka amin'ny fifaninanana. Tao amin'ny 2010, ny klioba dia nahazo ny Calder Cup elefanta, sehatra iray ho an'ny mpandresy ny AHL, maromaro an-tsoratra nanerana ny tantaran'ny ligy.
Jackass dia fampisehoana amin'ny fahitalavitra Amerikana amin'ny MTV avy amin'ny 2000 ka hatramin'ny 2002. Vondron'olona iray izay manamboatra toe-javatra maro mahatsikaiky, mahatsikaiky, mahatsikaiky, ary manambany ihany koa. Tamin'ny fiafaran'ilay fampisehoana, sarimihetsika 4 dia nalain'ny mpilalao Jackass, iray amin'izy ireo na dia ao amin'ny 3D aza. Ireo horonan-tsary roa ireo dia notsikerain'ireo mpitsikera mpilalao sarimihetsika. Ny fampisehoana sy ny mpandray anjara dia malaza amin'ny zatovo; Ny ray aman-dreniny noho ny karazana fialamboly hita any Jackass dia tsy mahazatra azy. Na dia manana fampitandremana fampidirana aza i Jackass mba hahazoana antoka fa tsy mahita ireo izay mahita izany, matetika ny Jackass tany am-boalohany no manahirana, anisan'izany ireo vondrona maromaro ao amin'ny Repoblika Tseky.
Thomas Alan Miandry (* 7. 1949 Desambra Pomona, California, Etazonia) dia American mpihira, malaza mpihira, mpamoron-kira sy ny mpilalao. Ny feony American mpitsikera Daniel Durchholz nanoratra hoe: Ny toetra feo sy ny mozika izay Mitambatra Chanson, BLUES, Jazz sy ny fanandramana singa izay manamorona indraindray efa ho amin'ny orinasa music, miandry efa nanao malaza toy ny mozika matanjaka toetra.
United States amin'ny fahavaratra Los Angeles Lalao Olaimpika in 1984 522 atleta nisolo tena (339 183 lehilahy sy ny vehivavy) ao amin'ny fitsipika 217 25 sportech.Medailisté valiny avy disciplínAtletikaPodrobnější fanazavana fanampiny, dia jereo ny Athletics amin'ny Summer Lalao Olympika 1984.MužiMuži, 400 metrůAlonzo BabersRozběh - 45.81Čtvrtfinále - 44.75Semifinále - 45.17Finále - 44.27 (→ medaly volamena) Antonio McKayRozběh - 45.55Čtvrtfinále - 44.72Semifinále - 44.92Finále - 44.71 (→ medaly alimo) Sunder NixRozběh - 45.42Čtvrtfinále - 45.31Semifinále - 45.51Finále - 44.75 (→ 5. toerana) Men 5 000 metrůDoug PadillaRozběh - 13: 52.56Semifinále - 13: 41.73Finále - 13: 23.56 (→ 7. toerana) Don ClaryRozběh - 13: 44.97Semifinále - 13: 46.02 (→ tsy hampandrosoana) Steve LacyRozběh - 13: 46.16Semifinále - 13: 46.65 (→ tsy hampandrosoana) Men 10 000 metrůPat Porter Accel - 28: 19.94Finále - 28: 34.59 (→ 15. Place) Craig VirginRozběh - 28: 37.58 (→ tsy hampandrosoana) Paul CummingsRozběh - 29: 09.82 (→ tsy hampandrosoana) Men marathonPete Pfitzinger - 2: 13: 53 (→ 11. toerana) Alberto Salazar - 2: 14: 19 (→ 15. toerana) John Tuttle - dia tsy mahavita (→ tsy misy toerana) Men mitsambikina vysokýDwight StonesKvalifikace - 2.24mFinále - 2.31 (→ 4. toerana) Doug NordquistKvalifikace - 2.24mFinále - 2.29 (→ 5. toerana) Milton GoodeKvalifikace - 2.24mFinále - tsy nanoratra (→ tsy misy toerana) Men hitsambikina dalekýCarl LewisKvalifikace - 8.30mFinále - 8.54 (→ medaly volamena) Larry MyricksKvalifikace - 8.02mFinále - 8.16 (→ 4. toerana) Mike McRaeKvalifikace - 7.89mFinále - 7.63 (→ 11. toerana) Men trojskokAl JoynerFinále - 17.26 (→ medaly volamena) Mike ConleyFinále - 17.18 (→ medaly volafotsy) Willie BanksFinále - 16.75 (→ 6. toerana) Men PM oštěpemTom PetranoffKvalifikace - 85.96mFinále - 78.40 (→ 10. toerana) Duncan AtwoodKvalifikace - 79.34mFinále - 78.10 (→ 11. toerana) Steve RollerKvalifikace - 75.50 (→ tsy handroso, 18. toerana) Men miaraka amin'ny Kok momba ny tyčiMike TullyKvalifikace - 5.45mFinále - 5.65 (→ medaly volafotsy) Earl BellKvalifikace - 5.45mFinále - 5.60 (→ medaly alimo)
Helix Canadian mafy vatolampy / tarika rock mavesatra naorina tamin'ny 1974. Ny hira malaza indrindra ny taona 1984 ny "Rock Ianao". Ny andalana voalohany ka Nizara ny drummer Bruce Arnold ary firaka mpihira Brian Vollmer, guitarists Ron Watson sy Rick "mpitendry lokanga" Trembley keyboardist Don Simmons sy ny bassist Keith "Bert" Zubrigg.
Ny 1997 Rowing World Championship dia 26. fiaramanidina natao teo anelanelan'ny 31. August sy 7. Septambra 1997 amin'ny Lake Lac d'Aiguebelette in Savoy in Francii.Každoroční nivoy regatta maharitra herinandro iray dia nokarakarain'ny federasiona iraisam-pirenena nivoy (Federasiona Iraisam-pirenena Rowing, FISA), matetika amin'ny faramparan'ny fahavaratra ny amin'ny Ila Bolantany Avaratra. Ao amin'ny tsy Olaimpika taona, ny fiadiana ny amboara eran maneho ny fahatanterahan 'ny iraisam-pirenena sy ny kalandrie nivoy taona ny Lalao Olaimpika teo aloha, dia ny tena zava-nitranga fifanintsanana. Ao amin'ny Lalao Olaimpika, ny fandaharan'asan'ny fandaharana dia tsy ahitana afa-tsy olympika ihany.
Ny fifaninanana hockey ataon'ny lehilahy amin'ny lalao Olympika 2014 dia nalain'i 12. ho an'ny 23. Febroary ao Sochi ao amin'ny kianja Ice Arena sy stadium stadium Shaiba. Ny fandresena Vancouver dia niaro ny ekipa Kanadiana rehefa nandresy ny 3: 0 tany Soeda.
Ny Connecticut Open dia tennis fifaninanana matihanina ho an'ny vehivavy, nilalao isan-taona tao amin'ny Wull Tour any Connecticut New Haven, tao amin'ny Centre Tennis Tennis Center Cullman-Heyman. Eo ivelan'ny kianjan'ny hetra amin'ny DecoTurf dia misy ao anatin'ny sokajy WTA Premier. Ny fifanintsanana dia ampahany amin'ny fitsidihan'ny US Open Series North American, fizaran'olona folo-tapitrisa nilalao nandritra ny enina herinandro talohan'ny US Open.
The Falls: Ny Testamenta Fitiavana dia sarimihetsika Amerikana 2013 notontosain'i Jon Garcia araka ny pejin-dry zareo manokana. Ny sarimihetsika dia manaraka ny lasibatry ny The Falls taorian'ny dimy taona.
Alice Cooper Teraka Vincent Damon Furnier (* 4. 1948 Febroary Detroit, Etazonia) vatolampy dia American mpihira, mpamoron-kira sy mpitendry mozika, izay asa antsasaky ny sakan'ny století.S sehatra mampiseho fa manasongadina guillotines, herinaratra seza, sandoka ra sy ny Boa bibilava Strangler Royal dia fifangaroana ny sary avy amin'ny horohoro sarimihetsika, cabaret, mozika, metaly mavesatra sy garazy vatolampy, nanao malaza amin'ny Alice Cooper tsehatra marika ny vatolampy mozika izay lasa fantatra amin'ny hoe dona vatolampy.
Oria Heep dia Britanika vatolampy tarika niforona tany Londres tamin'ny 1969. Roa ambin'ny folo ny Albums tonga ny UK Albums Tabilao (hiverina Fantasy takatry ny 7. 1975 partitions isan-taona), dimy ambin'ny folo raha Oria Heep Albums in takelaka 200 nahomby ny demonia & mitsiatsiaka (#23, 1972) niaraka tamin'ny vondrona Hitany Zeppelin, Black Sabata sy Deep Purple Heep Oria dia lasa iray amin'ireo ambony vatolampy vondrona tany am-boalohany 70. taona.
Ny 2015 Elite World Hockey Championship dia nanatrika ny ekipa nasionaly 16. Ny ekipa tsirairay dia manana mpilalao 15 farafaharatsiny (mpanafika sy mpiaro) ary tapa-bolana roa, ary ny ankamaroan'ny mpilalao 22 sy ny mpilalao baolina telo.
Richard Laughlain "Lochlyn" Munro (* 12 Febroary 1966, Lac La Hache, British Columbia, Kanada) dia mpilalao kanadiana. Izy dia malaza amin'ny anjara asan'ny lahatsary toy ny Night ao Roxbury, Movie Scary, ny sasany toa an'i Blond sy Freddy vs. Jason. Ny taona 1999-2000 dia nitendry an'i Jack Sheridan tao amin'ny tantara an-dàlambe The Witches. Izy io dia nohamarinina noho ny anjara andraikitra 200 tao amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika.
1942 (MCMXLII) dia ny taona araka ny kalandrie gregorianina nanomboka ny čtvrtkem.UdálostiProtektorát Bohemia sy Morava21. Martsa - Staff Kapiteny. Vaclav Moravek, ny lava indrindra mavitrika amin'ny mpanjaka telo, dia maty noho ny shootout amin'ny mpiasa am-polony maro gestapa27. May - Gabčík Jozef sy Jan Kubis nihaona ny fanamby Anthropoid fandidiana, ary manala ny Reich Mpiaro lefitra sy ny lehiben'ny RSHA Reinhard Heydricha10. Jona - Ny Alemaina Nazia ho simban'ny ny tanànan'i Lidice amin'ny Kladna18. Jona - namono fito paratroopers miafina ao am-piangonana. Cyrille sy Méthode (Adolf Opalka, Joseph Gabčík, Jan Kubis, Joseph Waltz, Josef Bublík, Jan Hruby, Jaroslav Svarc)
The Gift dia iray amin'ireo fombafomba ambony ao Mormona (na dia tsy ny rehetra no manaiky izany lanonana Môrmôna sehatra) no nampidirina .Obdarování 1842 Môrmôna hatramin'ny mpanorina Joseph Smith ho toy ny ampahany amin'ny miafina fombafomba anatiny ao anatin'ny Fiangonana Môrmôna. Amin'izao fotoana izao, ny alalan 'ny fanafiana masina CJKSPD amin'ny alalan'ny mpikambana olon-dehibe rehetra, raha mendrika. Ny olon-drehetra koa nampirisika hanatanteraka ny lanonana fanomezana ny an'ireo razambeny efa nodimandry. Ny lanonana tao an-Mazava ho azy fa ny tantara im-betsaka toetr'andro ny famokarany. Araka CJKSPD deified tsy ho ny olona ka tsy hiverina ho eo anatrehan 'Andriamanitra any an-danitra tsy misy lanonana Gift ..